Home » News » NAB NY 2019: TVU Networks 'Cloud-based TVU Talkshow iyo AI-based TVU MediaMind Waxay Albaabada u Fureysaa Soosaarid Dheeraad ah oo Fidsan iyo Waxgal Ah
NAB NY 2019: TVU Networks 'Cloud-based TVU Talkshow iyo AI-based TVU MediaMind Waxay Albaabada u Fureysaa Soosaarid Dheeraad ah oo Fidsan iyo Waxgal Ah
MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA - OCTOBER 4, 2019 - Sannadkan NAB (Ururka Qaranka ee Idaacadaha) Show NY, TVU Networks, suuqa iyo hogaamiyaha tikniyoolajiyada ee xalka fiidiyowga tooska ah ee IP-ku saleysan, ayaa soo bandhigi doona shirkaddiisa cusub TVU Talkshow, xalka ugu horreeya ee mid-mid ah ee wax soo saarka dhacdada tooska ah kaas oo u oggolaanaya ka qaybgalka dhagaystayaasha tooska ah fiidiyowga. TVU Networks wuxuu soo bandhigi doonaa TVU Talkshow oo ay weheliso isku dhafnaan, otomaatik ah, xalka qulqulka-sheekada-dhexe, TVU MediaMind. Shirkadda ayaa sidoo kale bixin doonta xirmo caadooyin la awoodi karo oo qaali ah oo loogu talagalay madax-bannaannada; xirmo ayaa suurtagal ah inuu albaabka u furo TVU's 3,000 + saldhiga macaamiisha adduunka. Kaqeybgalayaasha NAB NY waxay awood u yeelan doonaan inay wax badan ka bartaan barnaamijka 'TVU's' ee laga sameeyo booth N744.
TVU waxay samayn doontaa mudaaharaad toos ah oo toos ah oo ah TVU Talkshow xalka u dhexeeya rugtiisa iyo istuudiyaha fog. Martida waxay awood u yeelan doonaan inay la kulmaan TVS Talkshow oo la mid ah oo laga sameeyay qolka TVU. TVU Talkshow wuxuu kaqeyb qaataa dhageysiga dhageystayaasha heerka xigta isagoo u oggolaanaya dadka inay ka qeybgalaan munaasabadaha tooska ah ama bandhigyo lagu marti qaaday ayagoo wacaya adoo adeegsanaya barnaamijka moobiilka ee TVU ee Talkshow. Nidaamka maaraynta iskuxiran ee iskuxiran ee xalka wuxuu ka caawiyaa soosaarayaasha inay sii fiiriyaan lambar kasta oo soo wacayaasha, iyo taakuleynta ay u sameyso IFB waxay awood u siineysaa isgaarsiinta udhaxeysa martigaliyayaasha iyo soo wacayaasha sidoo kale shaqaalaha wax soosaarka iyo howl wadeyaasha kaamirada. Intaa waxaa sii dheer, TVU Talkshow gabi ahaanba waa daruuriga ku saleysan, samaynta sameynta iyo qaliinka mid aad u fudud. Xalka waxaa lagu maareeyn karaa adeegsiga websaydh-ku-habboon-saaxiibtinimo oo adeegsada. TVU Talkshow wuxuu gaarsiin karaa fiidiyoo dhowr goobood, oo ay ku jiraan CDNs, aaladaha warbaahinta bulshada, boggaga websaydhyada iyo telefishanka awood u leh TVU Grid, oo leh hal guji; waxay kaloo awood u leedahay soosaarka SDI dhaqameedka iyadoo loo sii marinayo kuwa qaata TVU.
Ku biirista TVU Talkshow at NAB NY 2019 waa shirkadda isku-dhafan, otomatik ah, qulqulka shaqada ee ku saleysan AI, TVU MediaMind. Adigoo adeegsanaya AI si ay ugu calaamadiso hantida warbaahinta metadata markay ka guurayaan marxaladda iibsiga una sii gudbaan qaybinta, TVU MediaMind waxay u oggolaanaysaa wariyaasha inay sifiican u abaabulaan oo ula socdaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin warbaahinta, ugu dambeyntiina waxay u suurta gelineysaa inay soo saaraan waxyaabo loogu talagalay dhowr madal, oo ay ku jiraan baahinta dhaqanka. iyo warbaahinta bulshada. Iyada oo la adeegsanayo xaddiga qulqulka shaqada, warbaahinnada ayaa waqti badbaadin kara, kordhinta wax soo saarka iyo isku-habeyn - ugu dambeyntiina sifiican loo monetize - qalabkooda cayriin.
Matt Keiler, oo ah Madaxweyne kuxigeenka, Iibka Xisaabaadka Muhiimka ah ee shirkadda ayaa yidhi: TVU Networks. Xalka sida TVU MediaMind iyo TVU Talkshow waxaa loogu talagalay inay dadka ka dhigaan shaqadooda mid aad u sahlan oo hufan, oo aan taas ahayn - waxaa sidoo kale loogu talagalay inay u adeegsadaan fiidiyowga tooska ah heerka xiga. TVU MediaMind waxay u oggolaaneysaa si dhakhso leh, soo saarid gaar ah oo casriyeysan sidii hore oo dhan, TVU Talkshow wuxuu u oggolaanayaa dhagaystayaasha inay ka qeybgalaan munaasabadaha ay jecel yihiin iyo bandhigyada waqtiga dhabta ah, xasilloonida iyo dadaal la'aanta. ”
Marka laga soo tago TVU Talkshow iyo TVU MediaMind, TVU waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa abaalmarinta ku guuleysata abaalmarinta tooska ah ee fiidiyowga tooska ah ee HEVC, TVU One, oo lagu xoojiyay tikniyoolajiyada gudbinta ee loo yaqaan 'Inteverse Statmux Plus (IS +)'.
TVU Networks shaqaaluhu waxay joogi doonaan barta N744 si looga wada hadlo xalka buuxa ee shirkadda.
TVU Networks kor u dhaafay macaamiisha 3,000 adduunka oo dhan. The TVU Networks Qoyska ku saabsan gudbinta IP iyo xalalka wax soo saarka nool waxay siinayaan wariyeyaasha iyo ururada shaqo adag oo lagu kalsoonaan karo si loo qaybiyo nuxurka fiidiyooga ah ee fiidiyooga ah si loo faafiyo, shabakadaha internetka iyo kuwa gacanta. TVU ayaa qayb muhiim ah ka noqotay hawlaha shirkado badan oo warbaahinta waaweyn ah. The TVU Networks suurtagalinta xalalka ayaa loo isticmaalay si ay u helaan, u gudbiyaan, soo saaraan, u maamulaan oo u qaybiyaan tayada xirfadeed ee tayada IP HD sawirada qayb ka mid ah wararka, ciyaaraha iyo dhacdooyinka caalamiga ah ee waaweyn. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan TVU Networks xal, fadlan booqo www.tvunetworks.com.
Madaxa shirkadda Olympusat Tom Mohler ayaa kor u qaadey barnaamijka 'PlayBox Neo' 19 Channel-in-a-Box - January 22, 2020
David Morris wuxuu ku biirayaa FOR-A oo ah Maareeyaha Iibka Gobolka Galbeedka - January 22, 2020
Shabakada TVU waxay soo dhaweynaysaa Jared Timmins oo ah gudoomiye kuxigeenka xalinta sare - January 14, 2020
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Caaqilada Cobalt Graham Chapman Prmoted toEditor ip isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw wax soo saarka live NAB New York SJGolden - Spears & Fiilooyinka TV Technology tvu TVU Networks Ultra HD Forum Video Engineer	2019-10-09
Previous: NAB Show New York: FOR-A si loo iftiimiyo ugu dambeeyay Production Live
Next: Sony Waxay sii deyneysaa Jiilka Dambe ee UWP-D Taxanaha Wireless Makarafoon Caan ah ee caan ah oo ay kujirto NFC SYNC